TAHNIYAD Aroos: kii ugu quruxda badnaa ee abid ka dhaca magaalada Brussels oo ah dalka Belgium ,,, labada lamaane ee is doortey oo kala ah Boqorka liban Mousstapha Hassan Iyo Boqorada samia mohamaed Houssein.Oo Arooskoodu Ka Dhacay magaalada Brussels. | Gabiley News Online
TAHNIYAD Aroos: kii ugu quruxda badnaa ee abid ka dhaca magaalada Brussels oo ah dalka Belgium ,,, labada lamaane ee is doortey oo kala ah Boqorka liban Mousstapha Hassan Iyo Boqorada samia mohamaed Houssein.Oo Arooskoodu Ka Dhacay magaalada Brussels.
October 6, 2017 - Written by maxamed jeex
TAHNIYAD Aroos: kii ugu quruxda badnaa ee abid ka dhaca magaalada Brussels oo ah dalka Belgium ,,, labada lamaane ee is doortey oo kala ah Boqorka liban Mousstapha Hassan Iyo Boqorada samia mohamaed Houssein Oo Arooskoodu Ka Dhacay magaalada Brussels.
Anagoo ah asaxaabtii & dadkii jeclaa labada lamaane ee is doortey ee kala ah liban mousstapha Hassan & samia mohamed Houssein waxaan leenahay noqda arooskii lagu liibaano ee kala hela caruur & risiq wanaagsan aamiin…hadaan nunahay SAMATAR’mohamed jeex, mohamed boss ,waxaan ku faraxsan nahay guurka lamaanahan waxaanan leenahay ilaahay ha,inii barakeeyo aamiin….
Dhamaan ehelada & asaxaabta arooska & aroosada ee kala jooga 5 shanta qaaradood ee aduunka waxay hambalyeynayaan boqorka & boqorada meherkoodu ka dhacay dalka belgium & canada…